ဘဝမှတ်တိုင်: Zapya Pro ကိုအသုံးပြုပြီး File တွေကိုပြန်ရှယ်နည်း
မိမိတို. iDevices တွင် ရှိသော Application,Game,Music,Video စသည်တို.ကိုပြန်၇ှယ်ချင်သော iOS User တွေအတွက် Zapya Pro ဖြင့် I to I ရှယ်နည်းကိုမသိသေးသော User တွေအတွက်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်.....Zapya Pro ကို iDevices နှစ်ခု တွင် install လုပ်ပေးရပါမည်။မိမိတို.ရှယ်သော အချိန်တွင် WIFI လိုင်းကိုချိတ်ထားရပါမည်။ IPA File တွေကို ရှယ်ပြီး ထို Devices တွင် install လုပ်မည်ဆိုပါက Appsync For iOS ကို သွင်းပေးထားမှသာ install လုပ်နိုင်ပါလိမ်မည်။Jailbreak လုပ်ထားသော iDevices တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ်မည်။
Zapya Pro ကို ရယူရန် ကျွန်တော် Repo ကို Add ပေးပါ ။
Cydia > Sources > Edit > Add >http://cydia/myrepospace.com/komin27/
Add ပြီးလျှင် Zapya Pro ကို install လုပ်ပေးပါ။install လုပ်ပြီးပါက iDevices နှစ်ခုကို WIFI ချိတ်ပေးပါ။Wifi လိုင်းရလျှင် Zapya App ကိုဝင်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ရပါလိမ်မည်။ မိမိ ပို.လိုသော ဖုန်းအမည်ကို Connect လိုက်ပါ
ချိတ်ပြီးပါက မိမိတို. ရှယ်လိုသော File ( Application,Game,Music,Video,Photo) တစ်ခုကို ရွေးလိုက်ပါ။(ဥပမာ အနေဖြင့် App တစ်ခုကိုပြန်၇ှယ်ပြပါမည်။အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါမည်။ Transfer ကို ရွေးပေးပါ။ (မိမိတို.ပြန်ရှယ်လိုသော File သည် တစ်ခုထပ်ပိုပါလျှင် Select လုပ်ပြီးပိုနိုင်ပါသည်။)
မိမိတို.ပြန်ရှယ်လိုက်သော iDevices ၏ Zapya App အောက်နားက History ကိုဝင်လိုက်ပါ။အောက်ကပုံလေးထဲးက မျှားပြထားသောနေရာကိုေ၇ွးပေးပါ။
100% ပြည့်ပါကအောက်ကပုံလေးအတိုင်း install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Application,Game တို.ကို ပြန်ရှယ်ရာတွင် Uncracked App(Apple Store မှ ကိုယ်ပိုင် ID ဖြင်.ဒေါင်းထားသော App) ကိုပြန်၇ှယ်ရာတွင် မူလပိုင်ရှင်၏ Apple ID ကိုထည်.ပေးရပါမည်။Cracked Apps တွေကိုပြန်၇ှယ်၇င် ID မတောင်းပါ ခင်ဗျ။
အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း Game,Music,Video,Photo တို.ကိုပြန်ရှယ်နိုင်ပါသည်။
Credit...by CYDIA REPO AND CYDIA TWEAK,
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/03/2014 10:34:00 pm
Phyo Waihin Htet7May 2015 at 13:26
Phyo Waihin Htet 8 May 2015 at 18:12
Phyo Waihin Htet7May 2015 at 13:27
Phyo Waihin Htet7May 2015 at 13:31
Phyo Waihin Htet7May 2015 at 13:33
Phyo Waihin Htet 8 May 2015 at 16:59
Phyo Waihin Htet 8 May 2015 at 17:00
Phyo Waihin Htet 8 May 2015 at 18:11